Ukujonga impilo kwiAkhawunti -
Njengomzimba womntu ofuna ukujongwa rhoqo kwezempilo ukuze ukhule kwaye uphile kwaye uphile ubomi obude, iakhawunti yeshishini nayo ifuna ukujongwa rhoqo 'kwempilo' yayo. Njengeyona njongo yalo naliphi na ishishini kukukhula kunye nokuchuma ngenkqubela phambili kwintengiso, kubaluleke kakhulu ukuba kubekho oku kukhula ngaphandle kwekhefu okanye izithintelo. Impilo yeakhawunti elungileyo yomthengisi ilingana nentengiso elungileyo. Nangona kunjalo, ukugcina iimetrikhi ezahlukeneyo zempilo yeakhawunti yomthengisi kunokuba ngumsebenzi onzima. Oku kuya kusiba nzima nangakumbi ngenxa yentengiso enkulu yeshishini elikwi-Intanethi. Ukuba nenkxaso yokukukhokela kunye nokukunceda ekugcineni ulungelelwaniso phakathi komyinge we-Order Defect Rate, iLate Dispatch rate, kunye nomgangatho wangaphambi kokufezekiswa kokurhoxiswa kunye nokufumana intengiso elungileyo kunokuba yinto enkulu kwishishini kwaye kuya kuthi ekuthinteleni ukumiswa kwexesha iakhawunti.
Iqela lethu likunceda ugcine impilo yeakhawunti yakho yeAmazon kwaye ikucebise ukuba ugcine amanyathelo afanelekileyo kwezi paramitha zilandelayo:
Misela izikhokelo zokunciphisa isiphene
Indlela yenkonzo yoMthengi
Ukujongana nokucinywa kwangaphambi kokuzaliseka
Uqwalaselo lwempilo lweakhawunti alugcini ngokugcina ukukhula kweshishini luzinzile, ikwanceda ukugcina ubudlelwane obuhle kunye nabathengi. Iqela le-APlus Global lizibophelele ekwenzeni ishishini le-e-commerce lihambe ngokutyibilika kangangoko kubo bonke.